Dropbear SSH: isina huremu nzira kune OpenSSH | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchishanda uri kure nekombuta yako kana sevha, kana iwe uchingoda kuita zvimwe zvigadziriso uchishandisa nharembozha yako usingatombofaniri kuve uri pamberi pemuchina waunoda kubata, iwe unotoziva kuti imwe yeakanakisa sarudzo iwe gadzira imwe. SSH (Yakachengeteka Shell) kubatana iyo yaunogona kuisa maodha kubva kune SSH mutengi kuenda kumuchina wako urikuita seSSH server kana kunyatsoita kumwe kuchinjisa kwedatha pakati peimwe neumwe.
Sezvo iwe uchiziva, kune akasiyana software yekuita iyi mhando yekumisikidza, uye imwe yeanonyanya kuzivikanwa munzvimbo dzeLinux nharaunda OpenSSH, iyo yaunogona kuita yako server yemutengi nenzira iri nyore. Pane dzimwe nguva isu tataurawo nezve maapplication eApple anoita sevashandisi veSSH kana maseva kuti tibate zvakare nharembozha yedu kubva kune yedu ifnromatic michina kana zvinopesana. Asi OpenSSH haisi iyo yakapusa, ipakeji rine simba, kunyangwe ndichiisarudza pachokwadi kune dzimwe nzira ...
Kune rimwe divi, iwe unogona kunge uchitsvaga chimwe chinhu chakareruka kungave nekuda kwe zviwanikwa zvemuchina wako kana nekuda kwekuti iwe haudi kugovera zviwanikwa zvakawandisa kuti uite kubatana kuburikidza ne SSH protocol. Kana zvirizvo, mune ino chinyorwa ini ndinokuzivisa iwe kuDropbear SSH, kana iwe usina kuziva nezvazvo. Nepakeji iyi unogona kuva nediki uye isina huremu SSH server uye mutengi iyo inogona kutsiva OpenSSH pane chero POSIX chikuva, uye izvo zvinosanganisira GNU / Linux distros, BSDs, nezvimwe.
Dropbear chirongwa chakavhurwa sosi chakaburitswa pasi peMIT rezinesi, ine ruzivo rwekusimudzira rwakafunga kuti kushandiswa kwayo kwekurangarira kushoma, chimwe chinhu chinonakidza mumasisitimu akadzika kana akasimbwa, akatungamirwa zvikamu zveX11, zvinowirirana neyechokwadi faira fomati yeiyo OpenSSH yeruzhinji kiyi, inokwanisa yekudzoreredza emuno uye kure madoko (tunneling) uye zvimwe zvakawanda maficha. Kana uchida zvimwe unokwanisa tinya pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Dropbear SSH: isina huremu nzira kune OpenSSH